घर ELITES यसका लागि उनीहरुसँगको सम्बन्ध छ
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल एलिलाइट प्रस्तुत गर्दछ जुन सबै भन्दा राम्रो भनिन्छ "व्यवस्थित प्रबन्धक"। हाम्रो Aleksander Ceferin बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य तपाईले उल्लेखनीय घटनाहरु को एक पूर्ण खाता को आफ्नो बचपन को समय देखि तारीख सम्म ल्याउछ। विश्लेषणमा आफ्नो पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रसिद्धि भन्दा पहिले जीवन कथा, प्रसिद्धि कथा, रिश्ते र व्यक्तिगत जीवनमा वृद्धि भएको छ
हो, सबैलाई थाहा छ कि उनी रिश्तेदार अस्पष्टताबाट उडेको फुटबलमा दोस्रो-सबैभन्दा शक्तिशाली मानिस बन्न पुग्यो। तथापि, केवल केहि केहि Aleksander Ceferin जीवनी को विचार मा एकदम दिलचस्प छ। अब अनावश्यक बिना, सुरु गरौं।
Aleksander Ceferin स्लोभेनिया मा Ljubljana मा अक्टोबर 13 को 1967th दिवस मा पैदा भएको थियो। उहाँ आफ्नो आमा एना (एक अकादमिक) र आफ्नो बुबा पीटर (एक प्रतिष्ठित वकील) को जन्म भएको दोस्रो र सबै भन्दा सानो बच्चा थियो।
उनको ठूलो भाई रोक, अलेक्जान्डरको साथ लजबजाना (उनको गृहनगर) बढ्दै गयो एक बलियो र जिद्दी बच्चा थियो जसले प्रतिबद्धताको विशेषतालाई प्रदर्शन गर्न प्रदर्शन गरे, वास्तवमा तिनको बुबा पत्रुसले निम्न तरिकाले यसो भनिन्:
"एलेक्जान्डर केवल चार थियो जब उनले एक कुकुरको साथ हिँड्न थाले। कुकुरले घरबाट भाग्न चाहन्थे, साना अलेक्जान्डले छोडेनन्, कुकुरले उसलाई मैदानमा घुमाए, तर अलेक्जेन्डरले पछाडि राखे र घरभरि घुमाए "
प्रतिबद्धताको प्रारम्भिक चिन्हको रूपमा, जवान Aleksander थाहा थियो कि उनलाई तिनलाई चिन्ता गर्ने समस्याहरू र तिनका वृद्ध भाइ रोकलाई कसरी राम्ररी समाधान गर्न को लागी एक विशेषता हो जसले पछिल्ला सम्झौतालाई उनीहरूको आमाबाबुको निर्णयलाई उनीहरूको अभिभावकलाई स्वतन्त्र रूपमा जित्ने राम्रो तरिकाले प्रयोग गरेको थियो।
"हाम्रा आमाबाबुले हामीलाई केही उपकरण बजाउन कसरी सिक्न चाहन्थे। तिनीहरूले सम्पादकीय छनौट गरे, तर हामीले यसलाई पहिलो नजरमा घृणा गर्यौ। अभ्यासको घण्टामा, हामीले प्रशिक्षणमा कुनै पनि संगीत प्रतिभा वा प्रयास देखाउन सकेनौ। यो हाम्रो आमाबाबुको विनाश र हाम्रो संगीत शिक्षकको असफलतामा महिना लागे। "
उल्लेख गरिएको रोक।
Aleksander तथापि हामी कसरी समस्या समाधान गर्न सक्छौं। उनले सुझाव दिए कि हामी accordion को कमाई को शेयर बेचछन। यो हामीले कडा गोप्यतामा गर्यौँ। हाम्रो आमाले पछि पत्ता लगाउनुभयो कि उपकरण हराइरहेको थियो तर परेशान थिएन। सबै पछि, घर साधनको अहंकारपूर्ण टुक्रा बिना अधिक सम्बद्ध थियो।
उहाँ समाप्ति गर्नुहुन्छ।
तर, शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
Aleksander उनको मूल शिक्षा थियो Grosuplje मा एक प्राथमिक विद्यालय मा, जहाँ उनको आमा प्रिंसिपल को रूप मा सेवा गरे। विद्यालयमा हुँदा, उनी एक विद्यार्थी थिए जसले कहिलेकाहीं शिक्षालाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् र अन्य विद्यार्थीहरूसँग नम्रता बनाइदिए। यद्यपि, उनको आमा (तल उहाँलाई चित्रित) उनको लागि एक नरम स्थान थियो र उनीहरूको दुर्व्यवहारको अनदेखी थियो।
विद्यालयको अन्तमा, एलेक्लेन्डरले आफ्नो साथीहरूको साथमा फुटबल खेलाए, मध्य मिडफिल्डरको क्षमतामा सेवा गर्दै। त्यसबाहेक, उहाँका समर्थक थिए Hajduk Split, जो समय मा पूर्व युगोस्लाविया मा सर्वश्रेष्ठ टीमहरु मध्ये एक थियो।
प्राथमिक स्कूलको समापन पछि, Aleksander एक साफर बनने सपना थियो तर यसको सट्टा, जिमनासियममा नामांकन भएको थियो जहाँ उनी आफ्नो माध्यमिक स्कूल शिक्षा थियो। पहिले उनीहरूको लागि छोडेर पहिले Sticno मा Gimnazija थियो पोल्जाना जिमनासियम मा लाजबजाना.
तर, सडकमा फेम
1991 त्यो साल थियो जो Aleksander ले कानून मा अध्ययन गर्न प्रवेश प्राप्त गरे लजबजाना विश्वविद्यालय। यसको बेला, उहाँले मानव अधिकार ओम्बड्सम्यानको अवधारणामा मजाक गर्नुभयो, एक अध्ययन मात्र यो समय मा स्क्यानडिभियन देशहरु द्वारा जान्दथे।
Aleksander को लागि स्नातक पछि प्रसिद्धिको लागि बाटो लामो र तेज थियो। उनी पहिले आफ्नो बुबा पीटरको नेतृत्वमा आफ्नो परिवारको कानुनी फर्ममा सामेल भएका थिए र खेलकूद क्लब र व्यावसायिक एथलीटहरूको प्रतिनिधित्वमा रुचि राखे।
वैधानिक प्रतिनिधित्वको गतिविधिले उनीहरूले स्लोभेनियाको सबैभन्दा सफल फिट्टल क्लब, केएमएन सिभ लेस्सी लिटिया र साथमा शौकिया साइड, एफसी लाजबजाना सबैलाई 2005-2011 को बीचमा औपचारिक चासो र मुख्य भूमिका खेल्दछ।
2011 मा लम्बाई को निर्माण को शुरुवात गर्दा एलेक्न्डरन 2011 मा स्लोभेनिया (एनजेएस) को फुटबल एसोसिएशन स्लोभेनिया (NZS) को रूपमा निर्वाचित भएको थियो, जसको एक प्रभाव हो कि उनले प्रभावी ढंग देखि UEFA कानूनी समिति को 2011 देखि 2016 सम्म दोस्रो र तेस्रो उपाध्यक्ष बने।
अन्ततः उनको सम्बन्ध पछि सापेक्षित अपमानिता देखि उभिएको थियो जुन सितम्बर 12 मा एथेन्स मा 2016 असाधारण यूईएफ कांग्रेस मा UEFA को सातौं अध्यक्ष भयो र स्वचालित रूप देखि विश्व फीफा को उपाध्यक्ष बने। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
अलेक्जान्डर उनको सुन्दर पत्नीलाई बारबरा सेफरिन भनिन्छ। जोडे पहिलो उनीहरूको विवाहमा उपस्थित हुँदा साथीहरू र पछि डेटिङ सुरु गरे। उनीहरूले आधिकारिक रूपमा 1999 वरपर विवाहित विवाह गरे र पछि देखि विवाह गरेकी छिन्।
यो ध्यान दिनुहोस कि बारबरा पेशा द्वारा एक फोटोग्राफर छ र उनको तस्वीरहरु र पुस्तकहरु को निजी गैलरी को मालिक छ। त्यो उनीहरूले निम्न तरिकामा वर्णन गर्नुहुने पतिको प्रशंसा गर्न कहिल्यै छोडेनन्:
"उहाँ धेरै मायालु, सज्जन, ध्यान दिनुहुन्छ, एक जना मानिसको जस्तै अत्यन्तै सुरक्षात्मक हुनुपर्छ। यद्यपि उनी कहिलेकाहीं सख्त हुन सक्थे, मलाई स्वीकार्नु पर्छ कि उहाँसँग एक सुन्दर आत्मा छ जुन म प्रेममा परेको थिएँ। "
Aleksander सँग बारबराको विवाह तीन बच्चाहरूसँग आशिष् दिइन्छ। तिनीहरू समावेश छन् नीना (1993 जन्मिएको) Neza (2002 जन्मियो) र एनाit (2005 जन्मिएको)।
तर, के तपाईंलाई थाहा छ?
Aleksander कार द्वारा चार पल्ट Sahara डेजर्ट र एक पल्ट मोटरबाइक मा पार गरेको छ
त्यो के रूप मा जान्छ मा लडने को लागि अनुच्छेद गरिएको थियो दस-दिन युद्ध तथापि, युद्धले कुनै पनि कार्य देखाउनुअघि समाप्त भयो।
लडाकू को तैयारी को बोले, Aleksander को कराटे मा एक तिहाई र काले बेल्ट छ
Asides स्लोभेनिया बोल्ने, Aleksander अंग्रेजी र इटालियन मा धारणा छ,
उहाँ कुकुरहरूको प्रेमी हुनुहुन्छ र तिनका छोरीहरूका लागि तीन जना कुकुर छन्।
Aleksander एक भावुक व्यक्ति हो जसले जो गर्दछ उसले आफ्नो विश्वासको साहस। उपेन्द्रित अनुष्ठानमा थपिएको उनको असाधारण सामाजिक क्षमता, न्यायको भावना, दृढता, ध्यान, साथै उनीहरूको परिवारको चरम भक्तिको रूपमा हो।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Aleksander Ceferin बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।